Kedu usoro mgbanwe maka mgbanwe ihu igwe a na-ewere na Europe? | Netwọk Mgbasa Ozi
Foto - EEA
Nrịgo elu oke osimiri n'ihi mgbaze nke okporo osisi, ịrị elu nke okpomọkụ gburugburu ụwa, na mmụba na-aga n'ihu na oke idei mmiri, na-eme Europe ịmalite iji mgbanwe ihu igwe kpọrọ ihe nke ukwuu.
A na-ewere usoro mgbanwe iji chebe ụsọ oké osimiri ma gbochie ọdachi ịda. Ma gịnị bụ nha ndị ahụ?
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ewepu mgbanwe ihu igwe na G20 ekele Donald Trump, Na mpaghara ochie enwere obodo iri na otu nke European Agency nke European Environment Agency achọpụtala dị ka ezigbo ihe atụ nke mmegharị nye nsogbu a n'oge na-adịghị anya ga-emesịa anyị niile, ha bụ: Bilbao (Spain), Lisbon (Portugal), Copenhagen (Denmark), Hamburg (Germany), Ghent (Belgium), Malmo (Sweden), Bratislava (Slovakia ), Smolyan (Bulgaria), Paris (France), Amsterdam (Holland) na Bologna (Italytali).
Otu n'ime usoro a ga-anabata bụ: owuwu nke ihe owuwu na-echebe megide idei mmiri, ọ nguzobe nke mmiri tankị na naturalization nke obodo tọ osisi n’elu ụlọ, imepụta ubi obodo na / ma ọ bụ ịkụ osisi.
Foto - Bilbao International
N'ihe banyere Bilbao, a ga-ewu agbata obi ọhụrụ na-egosi ide mmiri a na-akpọ Zorrotzaurre. The district ga-ke keakamere peninshula jikọtara ala Chile site akwa. Mụ amaala nwere ike ịnwe mmetụta nke ukwuu, ebe a ga-etinye nnukwu ihe mgbochi iji chebe ha site na idei mmiri. Mana usoro ahụ anaghị akwụsị na Zorrotzaurre, kamakwa a ga-ebuli ọkwa ala nke ụlọ ndị ahụ ma mepụta oghere ọhụrụ.
N'aka nke ọzọ, na Copenhagen emeela atụmatụ iji bulie ala ahụ n'ọnụ ụzọ na akụrụngwa nke metro ọhụrụ ahụ, na kwa, ebe enwere ike, na nke ochie.
N'ihi ya, ikekwe nsonaazụ nke mgbanwe ihu igwe adịghị njọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Kedu usoro mgbanwe maka mgbanwe ihu igwe a na-ewere na Europe?
Amsterdam na-arụsi ọrụ ike megide mgbanwe ihu igwe